Home Wararka Doorashada 5 kamid ah kuraasta Golaha Shacabka oo lagu qabtay Baydhabo
Doorashada 5 kamid ah kuraasta Golaha Shacabka oo lagu qabtay Baydhabo
Waxaa Maanta Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay lagu qabtay doorashada Shan kamid ah kuraasta Golaha Shacabka ee degaan doorashadoodu tahay Koonfur Galbeed, kuwaas oo ay ku guuleysteen kuwo horay kuraastaas ugu fadhiyay iyo kuwo ku cusub.
Kursiga Koowaad ee doorashadii Maanta oo ah Hop184 ayaa waxaa ku tartamay Xasan Cabdinuur Cabdi oo horay ugu fadhiyay Kursiga iyo Maxamed Cabdulaahi Cali, waxaase ku guuleystay Xasan Cabdinuur Cabdi oo hadda ah Wasiirka Tamarta & Biyaha Dowladda Soomaaliya.
Xasan Cabdinuur Cabdi ayaa helay codod gaaraya-72 cod halka musharaxii la tartamayay ee Maxamed Cabdulaahi Cali uu heley 27 cod, waxana halaabay laba Cod.
Kursiga labaad ee HOP085 oo uu ku fadhiyay Shariif Maxamed Cabdalla ayaa waxaa ku tartamay isla Shariif Maxamed Cabdalla iyo Maxamed Xuseen Mukhtaar, balse waxaa markale Kursiga ku guuleystay Shariif Maxamed Cabdalla.
Ilaa 101 Ergo ayaa doorashada codeeynayay, waxaana codadka ay u kala heleen Shariif Maxamed Cabdalla oo helay 79 Cod halka Musharrixii la tartamayay ee Maxamed Xuseen Mukhtaar uu helay 19-cod, waxaana halaabay 3 Cod.
Kursiga Saddexaad ee doorashadii Maanta ka dhacday Magaalada Baydhabo ee Hop-176 ayaa waxaa ku tartamay Maxamed Mursal Maxamuud Boorow iyo Cabdixakiin Mustaf Ibraahim, waxaana kursiga ku guuleystay Maxamed Mursal Maxamuud Boorow oo kursigaan horay ugu fadhiyay.
Doorashada Maanta ee Kursiga HOP176 ayaa waxaa codeeynayay 100 Ergo, waxaana codadka ay u kala heleen Maxamed Mursal Maxamuud Boorow ayaa helay codad gaaraya 73-cod halka musharaxii la tartamayay ee Cabdixakiin Mustaf Ibraahim uu heley cod-26, waxaana halaabay hal Cod.
Kursiga Afaraad oo ah Hop-046 oo ay horay ugu fadhisay Raabaco Sheekh Nuur ayaa waxaa Maanta ku tartamay Maxamed Wardheere Cabdi iyo Cabdulaahi Samow Cusmaan, balse waxaa ku guuleystay Maxamed Wardheere Cabdi.
Ilaa 95 Ergo ayaa codeyneysay kursigaan, waxaana codadka ay u kala heleen Maxamed Wardheere Cabdi oo kursiga ku guuleystay ayaa helay codad gaaraya 83-cod halka musharaxii la tartamayay Cabdulaahi Samow Cusmaan uu heley 11-cod, iyada uu halaabay hal Cod.
Ugu dambeyn Kursiga Shanaad ee ugu dambeeyay doorashadii Maanta ka dhacday Magaalada Baydhabo oo ah Hop-156 oo uu ku fadhiyay 4-tii sano ee la soo dhaafay Cali Cabdi Cismaan ayaa waxaa Maanta ku tartamay Maxamed Aadan Maxamed iyo Maxamed Ibraahim isaaq, waxaase ku guuleystay Maxamed Aadan Maxamed.
Kursiga HOP156 ayaa doorashadiisa waxaa codeyneysay ilaa 100 Ergo ah, waxaana tartamayaasha ay u kala heleen Maxamed Aadan Maxamed 88 Cod halka musharaxii la tartamayay ee Maxamed Ibraahim isaaq uu heley 10-cod, waxaana halaabay laba Cod.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa noqday Maamulkii ugu horeeyay ee fuliya heshiiskii Golaha wadatashiga ku gaareen Magaalada Muqdisho Sagaalkii Bishaan, waxaana Maamulka labaad uu noqon doonaa dowlad Goboleedka Jubbaland.
Previous article[Puntland] Cabashada musharraxiinta u taagan aqalka hoose oo aad iskusoo taraysa
Next articleDeni oo Boosaaso u tagaya xalinta khilaafka PSF
Shabaab oo shaacisay cidda aay la beegsaneysay Qaraxii maanta
Wax-badan ka ogoow socdaalka Farmajo ku gaaray Johannesburg